Nhazi ụlọ ọrụ yana nkwado azụmahịa na Latvia
Formlọ ọrụ ụlọ ọrụ Latvia
Guzobe ụlọ ọrụ Latvia
Ebe obibi azụmahịa
Ndebanye aha ụlọ ọrụ na Latvia
Nhazi ụlọ ọrụ na Latvia bụ usoro dị mfe ma kwụ ọtọ. N’ezie, Latvia n’etu n’agba nke iri na iteghete n ’World Bank kwa ubochi "Doing Business" . Thedị ụdị ụlọ ọrụ iwu kachasị ewu ewu na Latvia bụ Limited Liability Company ( SIA ) na Joint Stock ụlọ ọrụ ( AS ). A nwekwara ike ịdenye aha azụmaahịa gị dịka ọhaneze (nke nwere obere ma ọ bụ ndị na - azụ ahịa) ma ọ bụ onye na - azụ ahịa. Enwere ike ịbanye ụlọ ọrụ na Latvia site n'aka ndị obodo na ndị si mba ọzọ na ndị nwere iwu, yana ndị obodo.
Ego pere mpe * € 200
Na-atụ aro € 650
Niile ya bụ € 1950
Ntuziaka na mbinye aka dijitalụ
Nzukọ ndị mepụtara 
Ego steeti gụnyere
Ndebanye aha VAT 
Ndebanye aha EDS 
Ingdọ aka na ntị! Anyị nwere ikike pụrụ iche ịgbanwe ọnụahịa niile egosiri dịka ọrụ achọrọ enyere dị. Site n'inye anyị iwu ị ga - ekwenye na "ibido site" n'ụkpụrụ iwu.
* Ndebanye aha ụlọ ọrụ Latvian "ntanetị na e-mbinye aka."
 E-akwụkwọ ntinye pụtara inye aka na ntinye akwụkwọ dijitalụ na ntinye ntanetị.
   Enyemaka na nkwado naanị.
 Ndokwa n'oge atọrọ na notari.
 Represent na-anọchite anya / nyefee akwụkwọ gị na ndekọ nke ụlọ ọrụ nke Republic of Latvia.
 Adreesị adreesị gụnyere ruo otu afọ.
 EDS bụ usoro nkwupụta ụtụ isi kọmputa.
Uru uruazu ahia di na Latvia
Otu n’ime njikọ intaneti kachasị na ụwa;
Njikọ ụgbọ okporo ígwè na-adaba adaba;
Ndi mepere emepe na ngalaba IT ;
Okacha-ama nke di na ndi oru ngbo;
Onye otu EU na Eurozone;
Enweghị mgbochi ọ bụla na ndị ọchụnta ego si mba ọzọ;
0% CIT ọnụego na uru aewetara;
Ezigbo ọnọdụ maka iji azụmaahịa na - East na West;
Mmemme ikike obibi nke oke;
Usoro usoro ụlọ ọrụ kwụ ọtọ;
Enweghị ego mba ọzọ ma ọ bụ ihe mgbochi azụmahịa;
Onweghị ndị chọrọ ịga maka ụlọ ọrụ achọrọ ma ọ bụrụ na ejiri PoA ;
Akụrụngwa ndị mepere emepe;
Ego siri ike gburugburu ebe obibi na ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Usoro nhazi ụlọ ọrụ dị iche iche dabere n'ụdị azụmahịa azụmahịa ịchọrọ ịdebanye aha. N'otu aka ahụ, ụgwọ nke ndị na-eketa oke, obere ego mbido mbụ, yana oge, ego na akwụkwọ achọrọ dabere na ụdị azụmaahịa a họọrọ. A na - ekewa usoro ụlọ ọrụ ahụ ụzọ asaa:
Ndụmọdụ banyere ihe gbasara ụlọ ọrụ  ;
Ederede ederede maka nhazi ụlọ ọrụ  ;
Imepe akaụntụ akụ nwa oge (ọ bụrụ na achọrọ);
Ntinye ego buru ibu na ntinye ego ruo nwa oge;
Paymentkwụ ụgwọ ego gọọmentị  ;
Formationlọ ọrụ ụlọ na-edebere ihe ndekọ nke ụlọ ọrụ;
Mkpokọta mkpebi banyere nguzobe ụlọ ọrụ.
 Mkpebi aha ụlọ ọrụ ahụ, adreesị ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ, ego ole isi obodo na nkewa nke ndị ahịa (ọ bụrụ na ndị ahịa abụọ ma ọ bụ karịa), na ajụjụ ndị ọzọ.
 Akwụkwọ nhazi ụlọ ọrụ nwere ike ịdị iche na-adabere n'ụdị ụdị azụmahịa a họọrọ. A ga-edebanye ụfọdụ akwụkwọ n'ihu ọnụnọ a swornụrụ iyi.
 feekwụ ụgwọ ndebanye, ụgwọ maka mbipụta na ụgwọ ndị ọzọ enwere ike.
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ chọrọ ịghọ onye na-atụ ụtụ isi, ọ ga-ekwe omume itinye aka na ntinye aha VAT -payer n'otu oge ahụ mgbe ị na-etinye akwụkwọ ndebanye aha na Register nke ụlọ ọrụ.
Ngwa ndebanye (Mpempe KR4) - ka edeputa ya;
Ihe nnọchianya nke njikọ ma ọ bụ mkpebi nke mgbakwunye ma ọ bụrụ na otu onye guzobere;
Isiokwu nke mkpakọrịta;
Nkwupụta ụlọ akụ na-akwado ịkwụ ụgwọ nke isi ego mbụ;
Inye ọnụahịa (ma ọ bụrụ na achọrọ);
Ihe ndekọ nke ndị na - eketa - ka ha mepụta ya;
Nkwekọrịta nke ndị niile nọ n'ọdụ ahụ ka ewere ọnọdụ ahụ - ka a hazie ya;
Nkwupụta nke adreesị iwu;
Nkwenye nke onye nwe ihe ahụ ma ọ bụrụ na ala ahụ abụghị nke otu ndị guzobere ụlọ ọrụ ahụ;
Akwụkwọ edepụtara na-akwado ọrụ steeti na ụgwọ mbipụta akwụkwọ.
SIA (belata hara nhatanha)
Onye ahia ahia ya
Juo ndi ozo
1 (onye obi)
Nweta Companylọ Ọrụ Njikere
Company nweta ụlọ ọrụ dị na ya bụ ihe ọzọ bara uru maka ịmalite ụlọ ọrụ ọhụrụ. Dị ka ọ na-adịkarị, ndị ọchụnta ego na-ahọrọ ịnweta ụlọ ọrụ ejikerela ma ọ bụrụ na ha chọrọ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ n'ime awa ole na ole. Ihe ọzọ nwere ike ịbụ ihe dị mkpa maka ịdebanye aha ụlọ ọrụ oge ụfọdụ gara aga. A na-etinyekarị ụdị ihe a n’ọrụ gọọmentị. Ọzọkwa, ndị mmekọ na ụlọ ọrụ ego gị nwere ike ịtụle ụlọ ọrụ ochie nwere ntụkwasị obi karịa.
Ọ bụrụ na i kpebiri n ’ụlọ ọrụ a haziri ahazi kama ịmalite ụlọ ọrụ ọhụrụ, enwere ọtụtụ ihe ị ga-ebu n’uche:
You nwere ike ịmalite ọrụ azụmaahịa gị ozugbo azụchara zuru. Biko buru n'uche, na mgbanwe ọ bụla, dịka aha ụlọ ọrụ, ga-ewe oge na ụgwọ ọrụ ndị ọzọ. Providersfọdụ ndị na-enye ọrụ na-enye ọrụ ịzụta ụlọ ọrụ ahaziri ahazi. Ọ bara uru ịchọ ụlọ ọrụ akwadoro, nke edebanyere aha iji rụọ ọrụ na ngalaba kwesịrị gị.
Companieslọ ọrụ niile emebere aka nwere akụkọ ihe mere eme. Have ga-eme ike gị niile iji hụ na akụkọ ihe mere eme nke ụlọ ọrụ ị dị njikere ịzụ dị ọcha dị 100%. Nke a pụtara na ụlọ ọrụ anaghị arụ ọrụ efu efu na enweghị ụgwọ ọ bụla. Dị ka ọ na-adịkarị, ndị na-enye ọrụ na-enyefe asambodo na-egosi arụmọrụ efu nke ụlọ ọrụ ị dị njikere ịzụta.
Ọnụ ego nke ụlọ ọrụ na ọrụ haziri njikere dị iche iche n'etiti ndị na-enye ọrụ dị iche iche. Dị ka ọ na-adị, ọ dịkwa n’ụdị onye ahụ (nkeonwe ma ọ bụ nke iwu) yana ọnọdụ nke onye ahụ (onye bi ma ọ bụ ndị na-abụghị ebe obibi) ga-emetụta ego ị nweta ụlọ ọrụ akwadoro. Ọnụ ego ụlọ ọrụ dị njikere na Latvia dị n'etiti 1 000 EUR na 1 600 EUR ma tinye onwe ya:
Ajụjụ banyere ụlọ ọrụ ndị ejikere na Latvia;
Nkwadebe nke nkwekọrịta ịzụta omenala;
Notari na ego ala;
Nkwenye na ụlọ ọrụ ahụ nwere akụkọ ihe mere eme dị ọcha.
Estụ &tụ Isi & Akwụkwọ
Agbanyeghị ma ị nwetara ụlọ ọrụ akwadoro ma ọ bụ na ị ga - esi na usoro ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ iwu niile kwesịrị ịgbaso ụfọdụ usoro iwu gbasara ụtụ na itinye akwụkwọ. N'okpuru Iwu andtụ Isi na Ọrụ, ụtụ isi na ụtụ isi na-enye iwu ma ọ bụ obodo. Enwekwara otutu ihe ndi ozo di iche na ntinye aka nke ndi ochichi webatara. Lọ ọrụ ndị nwere ọnọdụ Mpaghara Akụkụ Pụrụ iche ( SEZ ), na-enwekarị ụtụ isi dị ala n'etiti uru ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, a na-agbada ụtụ ego ụlọ ọrụ na belata 3% nke nnukwu uru maka ụlọ ọrụ nwere ọnọdụ SEZ. Ọzọkwa, ewepụtara iwu dị iche maka ụlọ ọrụ mbido na 1 Jenụwarị 2017. Iwu ọhụrụ ahụ na-ekpebi ihe omume enyemaka steeti:
Ego edobere ụtụ isi ọha na eze site na nkwenye ndị ọrụ;
Mmemme nkwado na ebumnuche iji dọta ndị ọrụ ruru eru;
Ebe a na-akwụ ndị na-akwụ ụgwọ ego ụlọ ọrụ na ego akwụghachi CIT.
Legallọ ọrụ iwu, nke na-agbanwe agbanwe n'ime ọnwa 12 karịa 50 000 EUR, ga-edebanye aha dị ka onye na-akwụ ụtụ isi bara uru. Agbanyeghị, enwere ike ịdebanye aha dị ka onye na-akwụ ụgwọ VAT nwekwara tupu a rute n ’ụzọ a. Ọnụ ego VAT dị larịị na Latvia bụ 21% ma enwere ike ịkwụ ya otu ụzọ n'ụzọ anọ ma ọ bụ kwa ọnwa, dabere na njirisi ndị na-akwụ ụgwọ ahụ.
Site na 2018, a na-etinye ego ụtụ isi ụlọ ọrụ 20% naanị na uru a na-ekesa site na nkewa ma ọ bụ nke ejiri maka ebumnuche na-enweghị njikọ na mmepe nke azụmaahịa. Enweghị ụtụ isi ndị ọzọ na-etinyere na ego sitere na azụmaahịa. Companieslọ ọrụ ndị bi ebi na-akwụ CIT na ego ha zuru ụwa ọnụ. Ndị ụlọ ọrụ na-abụghị ndị bi na nwere ụlọ ọrụ na-adịgide adịgide ( PE ) na-ana ego ọnụego CIT na ego ha ga-enweta na Latvian. Enweghị PE, ụlọ ọrụ si mba ofesi nwere ike ịdabere na 0 ruo 15% na-anagide ụtụ n'ụgwọ ego ruru eru dị ka ịkwụ ụtụ isi na ụgwọ nchịkwa.
A nwekwara ike ịdenye aha ụlọ ọrụ dị ka obere ụlọ ọrụ. N'adịghị ka ụdị azụmaahịa ndị ọzọ dị n'iwu, obere ụlọ ọrụ ego bụ usoro ịtụ ụtụ kama ịbụ ụdị azụmahịa dị iche. Micro ụlọ ọrụ na-akwụ ụtụ isi 15% na ntụgharị nke ụlọ ọrụ ahụ. Enterlọ ọrụ Micro na-eche ọtụtụ ihe mgbochi, dịka ọnụego ụlọ ọrụ kwa afọ agaghị agafe 40 000 EUR ma ụgwọ ọnwa enweghị ike ịgafe 720 EUR kwa ọnwa.
A na-ana ndị bi na Latvian ụtụ ego onwe ha na ego ha zuru ụwa ọnụ. A na-ana ndị na-abụghị ndị bi ebe ahụ ụtụ isi nke onwe ha na ego ha nwetara n’obodo ha. N’afọ 2018, ewepụtara usoro ịtụ ụtụ ego onwe onye na-aga n’ihu. Nke a pụtara na a na-anata ụtụ ego nke onwe ya na ego ụtụ dị iche dabere na ego ole a na-atụ ụtụ. Onu ogugu ego nke onye isi ego ugbua bu ndi a:
A na-amata ọnụego ụtụ isi onwe onye nke 20% na ego ole a na-akwụ ụtụ nke na-agaghịfe 1 667 EUR kwa ọnwa ma ọ bụ 20 004 EUR kwa afọ;
Onu ego nke ndi mmadu anakpo 23% sitere na onodu ego ndi mmadu na achoro ahia, nke di n'etiti 1 667 EUR na 5 233 EUR kwa onwa ma obu n'etiti 20 004 EUR na 62 800 EUR kwa afo;
Taxtụ ụtụ isi nke onwe onye nke 31,4% bụ ego ole a na-akwụ ụtụ isi, nke karịrị 5 233 EUR kwa ọnwa ma ọ bụ 62 800 EUR kwa afọ.
Taxestụ isi ndị ọzọ ụlọ ọrụ dị na Latvia na-akwụ ụgwọ gụnyere ụtụ isi nchekwa ọha na ọrụ gọọmentị n'ihe ize ndụ azụmahịa. Companieslọ ọrụ Latvian ji ụgwọ itinye akwụkwọ akụkọ ụtụ isi tupu 15 nke ọnwa na-esote. Ekwesịrị itinye akwụkwọ nkwupụta ego maka afọ ego ọ bụghị mgbe ọnwa anọ gasịrị ka njedebe nke afọ ahụ gwụsịrị.
Ikike obibi site na azụmaahịa na Latvia
Uru ọzọ ịdenye aha ụlọ ọrụ gị na Latvia bụ ohere ọ nwere inweta ikike obibi na Latvia. Site n’inweta ikike obibi na Latvia, ị ga-enwe ike ịgagharị n’obodo Schengen ruo ụbọchị 90 n’ime oge ọnwa isii. Ndị nwere ikike obibi Latvian, yana ndị ezinụlọ ha, nwere ikike ịrụ ọrụ, ọmụmụ na iji ọrụ ahụike na Latvia. Uru ndị ọzọ gụnyere usoro mmezi maka ịnweta visa na United States na mba ndị ọzọ.
Usoro nnabata ikike obibi na-ebu ụzọ họrọ nhọrọ dị iche iche maka inweta ikike obibi site na azụmaahịa na Latvia:
Etinye ego na ngalaba nke ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ Latvian - onye ala ọzọ nwere ike itinye akwụkwọ maka ikike obibi ma ọ bụrụ na ọ nyere aka na isi obodo ụlọ ọrụ Latvian. Isi obodo etinye ego a ga-abụ ihe na-erughị 50 000 EUR (ọ bụrụ na ntụgharị ụlọ ọrụ kwa afọ adịghị karịa 10 000 000 EUR na ọ nweghị ndị ọrụ karịrị 50), ma ọ bụ 100 000 EUR (ọ bụrụ na ụlọ ọrụ otu afọ na-agafe karịa 10 000 000 EUR na ọ nwere ndị ọrụ karịrị iri ise na ndị enyemaka ya).
Comingghọ onye isi kọmitii, onye nchịkwa, onye otu kansụl, onye nnọchite anya onye ọrụ mmekọrịta, onye na-ahụ maka ya, onye na-ere mmiri ma ọ bụ onye nnọchi anya onye ahịa mba ọzọ na ọrụ dị iche iche metụtara ngalaba nke ụlọ ọrụ si mba ọzọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ Latvian.
Comingghọ onye ọrụ na ụlọ ọrụ Latvian na ụgwọ opekata mpe 860 EUR kwa ọnwa. Anaenye ikike obibi a maka afọ 5 mana ọ dị mkpa ịgbatị ya kwa afọ.
N'aka nke ọzọ, enwere ike itinye akwụkwọ maka visa ụdị C. Visa ụdị C bụ visa dị mkpirikpi na mpaghara Schengen. Ọ nwere ike ịbụ ntinye ọtụtụ, ntinye ma ọ bụ otu ntinye.
Varidị mgbanwe visa C-type
-Dị C-ụdị dị na mba ndị otu Schengen niile - visa dị n'otu, nke na-enyere ndị jidere ya aka ịnọ na steeti ọ bụla so na Schengen;
Visadị C-ụdị dị naanị na Latvia, ma ọ bụ nwepu aha otu ndị otu Schengen akọwapụtara.
Citizensmụ amaala nke European Union na-etozu oke maka inweta akwụkwọ ikike obibi na Latvia ma ọ bụrụ na onye ahụ ebie na Latvia afọ ise ma ọ bụ karịa. N'okwu ụfọdụ akọwapụtara, anaghị emebi iwu afọ ise ahụ.
Ana m anabata nchekwa nke onwe.
Contactdị Mkpọtụrụ Ngwa